ပိုကောင်းသော "လူမှုရေး" အတွက်4သိကောင်းစရာများ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 9, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Hanna ဂျွန်ဆင်
သင်ဖတ်နေလျှင် Martech Zoneအခွင့်အလမ်းကောင်းများကတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုဒီနှစ်မှာသင်၏စီးပွားရေးကိုလူမှုရေးရရန်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်သဘောပေါက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ က မကြာသေးမီစစ်တမ်း ငါတို့အဘို့အကောက်ယူခဲ့သည် GrowBiz မီဒီယာ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများ၏ ၄၀% သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် စီးပွားရေး Insanity ရေဒီယို Talk Show အရောင်း ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုရေးအကောင့်များ (တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်စသည်) ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့ထံအချိန်မရွေးရောက်ရှိရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းလမ်းရှိသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ခက်ခဲပြီးမြန်ဆန်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ အဘို့အလူမှုမီဒီယာ Marketer အဖြစ်ငါ့အလုပ် Zoomerangနှင့်ယခု SurveyMonkeyဆိုလိုတာကငါဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၊ နှစ်ခုကိုလေ့လာပြီး၊ ပိုအရေးကြီးတာက၊ Social Media အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကအသစ်အဆန်းများကိုရှာဖွေရန်၊ သင်၏ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်၊ သင်၊ သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပရိသတ်အတွက်ဘာအလုပ်လုပ်သည်ကိုတွက်ချက်ရန်မက်ထရစ်ကိုသုံးခြင်းအားဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့မင်းကိုစတင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိတယ်။
၁ ။ မေးပါ
ကြီးမားသောလူမှုရေးနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာသင့်ပရိသတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲ။ မေးပါ ဖန်တီးပါ ရိုးရှင်းသောစစ်တမ်း ၎င်းကိုသင်၏နောက်လိုက်များ၊ ပရိသတ်များနှင့်ဖောက်သည်များထံသို့ပေးပို့ပါ။ Zoomerang နှင့် SurveyMonkey တို့သည်သင်တတ်နိုင်သမျှအခမဲ့တင်းပလိတ်များများစွာကိုကမ်းလှမ်းသည် စိတ်ကြိုက် ရုပ်ပုံများ၊ လိုဂိုနှင့်ကုမ္ပဏီအရောင်များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမည်ကဲ့သို့အသုံးပြုနေသည်၊ မည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းမေးမြန်းပါ။ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့လိုချင်သည့်အရာများအကြောင်းသင်ပိုမိုသိရှိလေ၊ သူတို့အတွက်အသုံး ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့ပိုမိုပေးနိုင်လေဖြစ်သည်။
2. မြှင့်တင်ရန်, မြှင့်တင်ရန်, မြှင့်တင်ရန်
အကြောင်းအရာကောင်းများဖန်တီးခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပထမအဆင့်သာဖြစ်သည်။ သင်သည်ထိုအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Tweet ၎င်းအကြောင်းကိုသင်၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်၍ ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော Linkedin အုပ်စုစာမျက်နှာများတွင်တင်ပါ။ သင်သည်အခြားသူများ၏အကြောင်းအရာများကိုအချိန် ၈၀% နှင့်တုန့်ပြန်သင့်သည်၊ သင်၏အကြောင်းအရာကို ၂၀% မျှသာမြှင့်တင်သင့်သည်ဟုပြောသော ၈၀-၂၀ စည်းမျဉ်းကိုသတိရပါ။ ၎င်းသည်သဘာ ၀ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြစ်သည်။ မည်သူမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန် mumbo jumbo ကိုတစ်နေ့လုံးမကြားလိုပါ။
သို့သော်လက်တွေ့တွင်မျဉ်းကြောင်းကိုအနည်းငယ်မှုန်ဝါးနိုင်သည်။ ဘလော့ဂ်တခုခု (သို့) သင့်ပန်ကာရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုမှာမှတ်ချက်ပေးပါ။ တကယ်လို့သင့်တော်မယ်ဆိုရင်သင့်ဆိုဒ်ကိုလင့်ခ်တစ်ခုထည့်ပါ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များမဟုတ်ဘဲသင်၏ဖောက်သည်များအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဆိုပါကသင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှအခြားသူများပြောသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုတွစ်တာပြန်ပို့ပါ။ Linkedin အဖြေများကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကကူညီနိုင်သည့်ပြproblemနာတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုကမ်းလှမ်းပါ။ မှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်သင်၏မျှတသောဝေစုကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းအားဖြင့် (၈၀%) သင်၏မျက်နှာသာပြန်ပေးမှုကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
၃။ Outbound Marketing သည် Soo ၂၀၁၁ ဖြစ်သည်
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Inbound Marketing အကြောင်းပါ။ အဆင့် ၁ နဲ့ ၂ ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတာနဲ့သဘာဝကျသင့်ပါတယ်။ သင့်ဖောက်သည်များအားစိတ် ၀ င်စားဖွယ်၊ သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏နယ်ပယ်၌ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မတည်ဆောက်မီကြာမြင့်စွာအချိန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ လူတို့သည်ကားဝယ်လိုသည့်အချိန်တွင်သာမက ၂၀၁၂ မော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူများဘာပြောနေသည်ကိုသိလိုသည့်အချိန်တွင်လူတို့သည်သင်၏အော်တိုကုမ္ပဏီဘလော့သို့လာလိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အချိန်ပိုကုန်ကြလိမ့်မည်၊ သင်ပုံမှန်စာပို့သည်ကိုသူတို့သိသောကြောင့်၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုကြလိမ့်မည် (nudge nudge, wink wink) ။ သင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုသည်သင်၏ site သို့လူများလာနေသောအချိန်ပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်အဆင့် ၁ နှင့် ၂ ကိုသင်မည်မျှကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မည်။
ငါနှင့်ပြောဆိုသော SMB ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများစွာသည်လူမှုရေးကိစ္စများသည်၎င်းတို့အားလူသိရှင်ကြားအပြုသဘောဖြင့်ဖွင့်ပေးမည်ကိုကြောက်ရွံ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဤအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည် - ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ Facebook စာမျက်နှာတွင်အတားအဆီးမရှိဖောက်သည်တစ် ဦး မရှိသည့်နေရာတွင်တစ်ပါတ်ကုန်လွန်သွားသည်။ ငါသိတယ်၊ ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဖောက်သည်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီနေရာမှာထားခြင်းဖြင့်သင်စွန့်စားရသည့်တန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်ပြီးသူတို့ကသင့်ကိုလေးစားလိမ့်မယ်ဆိုတာသင်သတိရဖို့လိုသည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်သူတို့သည်လူမှုရေးပြheatနာများမဖြစ်ပွားသေးသောကုမ္ပဏီကို၎င်းတို့၏တွစ်တာစာမျက်နှာပေါ်တွင်အပူရှိန်များသောအားဖြင့်ပိုမိုသံသယဖြစ်လာကြသည်။ မကျေနပ်သော ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသူ ၅ ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ သူတို့၏မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက် ပို၍ ဆိုးသည်မှာအဆိုးမြင်သူများကနာကျင်သည်။
တုံ့ပြန်ချက်များကိုအချိန်မီ၊ အပြုသဘောဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်သတိရပါ။ ၀ ယ်သူသည်အမြဲတမ်းမှန်ကန်မှုရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်မည်သည့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုမဆိုတရားမျှတစွာပြုမူပါ။ ထို့ကြောင့်ထိုအရာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအခြေအနေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်သူတို့လုပ်နိုင်သည့်အထောက်အကူပြုလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်များကိုပေးပါ။ ထို့အပြင်တုံ့ပြန်ချက်အားလုံးသည်အပျက်သဘောဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုချီးမွမ်းပေးတဲ့အခါသူတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့လုပ်ချင်တာလား ဖောက်သည်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း မင်းနဲ့အတူ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အသံကိုထုတ်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့သူတို့အော်ဂဲနစ်ထောက်ခံချက်ရပြီးလူတိုင်းကအနိုင်ရတယ်။
ဤအချက် ၄ ချက်သည်သင်၏လူမှုရေးဖြစ်ရန်သင်၏ရှာပုံတော်၌စတင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များ၊ အခြားအကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်သင်၌ရှိသောမေးခွန်းများကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။ ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း!
11:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 35
မင်္ဂလာပါ Hanna! သင်ဤတွင်ပြောခဲ့သည့်အချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝသဘောတူပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်နှင့်၎င်းတို့ရရှိနိုင်သောပန်းတိုင်များစွာကိုရရှိရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သူများအတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုနည်းလမ်းအသစ်တွေရလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။ စီးပွါးရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းများရနိုင်ရန်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများကိုအကြံပေးသင့်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရိတ် post!
12:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 4, 53
အ ၀ င်အထွက်ဤနှစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသောအတိအကျဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာကိုရေးတာပဲ၊ ဒီ post ကအရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါပြောတာကိုလူတွေကြိုက်တယ်၊
ငါကျိန်းသေငါတို့ပရိသတ်ကိုစစ်တမ်းနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏အကြံပေးချက်ကိုယူသွားမှာပါ။ ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်။